လွန်ခဲ.သော စနေနေ.လေးက ဘုရားခန်းမှာ ဘုရားရှိခိုးပြီး အပြန် ထုံးစံအတိုင်း စာကြည်.တိုက်လေးမှာ ၀င်မွှေမိသည်။ တရားစာပေကို ဦးစားပေးဖတ် ဆိုသော စကားအတိုင်း ဘုန်းဘုန်းတွေရဲ. စာအုပ်များကို လှန်လှောလိုက်မိသည်။ ဆရာတောင် ရှင်ဆန္ဒာဓိက ရှင်ရ၀နွယ်(အင်းမ) အရှင် သာသန ပြီးတော. ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး အနှစ်သက်ဆုံးသော ဆရာတော် ဦးဇောတိက တို.၏စာအုပ်တွေကို အဓိကထား ဖတ်ပါသည်။ တွေ.သွားပါပီ ဆရာတော်ဦးဇောတိကရဲ. တစ်စိမ်.စိမ်.တွေးမယ်တဲ. စာအုပ်နာမည်လေးကို အရမ်းနှစ်ခြိုက်သွားသည်။ အေးခဲနေတဲ. ဒီဇင်ဘာ ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ ကွေးပြီးတွေးလိုက်ရင်တော. အရမ်းကိုကောင်းမှာဘဲ-- တရုတ်လက်ဖက်ခြောက်လေးခတ်ထားတဲ. ရေနွေးလေးသာ ပါလိုက်လို.ကတော. လုံးဝကို ပြီးပြည်.စုံမှာ သေချာသွားပီ- စိတ်ကူးလေးကတော. ကောင်းနေပြီ။ စိတ်ကူးကောင်းလေး အကောင်အထည်ဖော်ဖို. စာအုပ်လေးကို ယူခဲ.လိုက်ပါတယ်။ စာအုပ်ငှားဖို. စာရင်းတွေ ဘာတွေပေးစရာမလို အကုန်လုံး မာစတာ ကျောင်းသားတွေ ဆိုတော. စာကြည်.တိုက် အတွက်သီးခြားတာဝန်မပေးနိုင်ဘူး စည်းကမ်းတကျဖတ်ပြီး ထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတာ အကုန်နားလည်းထားသည်။ ဒီလိုဘဲ စာဖတ်နေကြလူတွေကသာ အားတဲ.အချိန်လေးမှာ ၀င်ပြီး စာအုပ်စီတာ စစ်တာကို လုပ်ပေးကြပါတယ်။
ကဲစာအုပ်လေးကို စဖတ်ဖို. လှန်လိုက်တော. ကိုကျော်သူထွန်းမှ လှူဒါန်းပါသည်တဲ.-- အောက်မှာရေးထားသေးတယ် ညီနောင်အပေါင်း ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝကြပါစေ --စီနီယာ အကိုကြီးရဲ. ကုသိုလ်လေးပါ။ ဆရာတော်ကို ကျေးဇူးတင်ရမည်.အပြင်ကိုကျော်သူထွန်းကိုလည်း အရင်ကျေးဇူးတင်ရမယ်။ သူလှူလို. ဖတ်ရတာမဟုတ်လား။ ဆရာတော်ဘုရားနဲ.အတူတူလိုက်ပြီးတွေးကြရအောင်နော်---
* ဘ၀ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နေသွားချင်တယ်ဆိုရင် သတိလေးနဲ. နေလိုက်ပါ။ ဘ၀ဟာ ရှင်းလာပါလိမ်.မယ်။ စိတ်ရှင်းရင် ဘ၀ရှင်းတယ်။ စိတ်ရိုးရင် ဘ၀ရိုးတယ်၊ စိတ်ရှုပ်ရင် ဘ၀လည်း ရှုပ်လာမည်၊ စိတ်ဆန်းပြားရင် ဘ၀လည်း ဆန်းပြားမယ်။
* ဘ၀ကို အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ ကျေကျေနပ်နပ် နေချင်တယ်ဆိုရင် သက်သက်သာသာ မနေပါနဲ.၊ ကြိုးစားပါ၊ အရည်အချင်းများများထုတ်ပါ။ အရည်အချင်း များများ ထွက်လေလေ ကျေနပ်မှု ရလေလေပဲ။
*စက္ကန်.တိုင်း စက္ကန်.တိုင်း တစ်ခဏတိုင်း တစ်ခဏတိုင်းကို တန်ဖိုးထားနိုင်မှ ဘ၀ဟာ တန်ဖိုးရှိတဲ. ဘ၀ ဖြစ်မှာပါ။
*လူဟာ အများအကျိုးကို ဆောင်ရွက်မှလည်းပဲ ကိုယ်.ဘ၀ကို ကိုယ်ကျေနပ်မှု ရနိုင်မယ်။
*ဘ၀မှာ တိုးတက်မှုမရှိရင် ဆုတ်ယုတ်နေတယ်၊ တန်.မနေဘူး။
*အရိုးသားဆုံးနည်းနဲ. အခက်ခဲတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်တဲ.သူ ဖြစ်လာရင် ပိုပြီးရင်.ကျက်တဲ.သူ မြင်.မြတ်တဲ.သူ ဖြစ်လာလို. ကိုယ်.ဘ၀ကို ပိုပြီး ကျေနပ်အားရတယ်။
*ကိုယ်.ကို သူများ ဘယ်လိုမြင်တယ်ဆိုတာ တစ်ခုထဲ ကြည်.ပြီး တန်ဖိုးဖြတ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်.ဘ၀ဟာ ကိုယ်ပိုင်ဘ၀ မဟုတ်တော.ဘူး။ ကိုယ်.တန်ဖိုးဟာ သူများ ပါးစပ် ဖျားမှာ ရောက်နေတော.မယ်။
*ကိုယ်.ဘ၀ ကောင်းတာ မကောင်းတာ ကိုယ်.အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
*အဖေါ်ကောင်း မိတ်ဆွေကောင်း လိုချင်ရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကပဲ အဖေါ်ကောင်း မိတ်ဆွေကောင်း ဖြစ်အောင် နေလိုက်ပါ။
*သူတစ်ပါးကို ရင်းရင်းနှီးနှီး ပွင်.ပွင်.လင်းလင်း မပြောဆို တတ်ဘူး၊ မဆက်ဆံတတ်ဘူး၊ မယုံကြည်ဘူး၊ စိတ်မချဘူး ဆိုရင် ကိုယ်.မှာ အဖေါ် မရှိတော.ဘူး။
*ဒေါသကြီးတဲ.သူလည်း အဖေါ်မဲ. နေတတ်တယ်။ ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင် စိတ်ကြောင်.၊ မနာလိုတဲ. စိတ်ကြောင်. အဖေါ်မဲ. သွားတယ်။
*ချစ်တတ် ကိုယ်ချင်းစာတတ်တဲ. သူဟာ အဖေါ်မဲ. အထီးကျန် ခံစားမှုဖြစ်တာ နဲတယ်။
* အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းဟာ အရည်အချင်းကို ပိုပြီး ထွက်စေနိုင်တယ်၊ စိတ်နေသဘောထားကို ပိုပြီးလေးနက်၊ ရင်.ကျက်၊ မြင်.မြတ်စေနိုင်တယ်။
*တစ်ဦး သိတာကို နောက်တစ်ဦးကို မျှပေးလို. လူ.လောကကြီး ဒီလို တိုးတက်လာတယ်။
*ကိုယ်.စိတ်ကို ကိုယ်.မိတ်ဆွေ ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ပြီဆိုရင် အဲဒီလူမှာ အင်မတန်မြင်.မားတဲ. စိတ်ဓါတ် အရည်အသွေး တွေရှိလာလိမ်.မယ်။
*နေရာ တစ်ခုကို မရမက မယူချင်တဲ. သူအဖို. နေရာ ပျောက်တယ်ဆိုတာ မရှိနိုင်တော.ဘူး။
*အခုသက် သာအောင်နေရင် ရေရှည်မှာ မသက်သာဘူး။
အများကြီးတွေးလိုက်ရင် မမှတ်မိမှာဆိုးလို. နည်းနည်းခြင်းနဲ. ဖြေးဖြေးခြင်း တွေးကြရအောင်နော်။ နက်နက်နဲနဲ တွေးမှ ပိုပြီးအရသာ ရှိလိမ်.မယ်။
ဆရာတော် ဦးဇောတိက ၏ တစိမ်.စိမ်.တွေးမယ် စာအုပ်မှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Posted by မောင်မောင် at 12:31
မောင်မောင်ရေ အရမ်းကောင်းတဲ့ ဆုံးမစာတွေဘဲ
မှတ်သားစရာလေးတွေ လာရောက်ဖတ်ခဲ့ မှတ်ခဲ့ပါတယ်မောင်မောင်ရေ
အဲ့ဒီစာအုပ်ဖတ်ဖူးတယ် တော်တော်ကြာပြီ.. မေ့သလောက်နီးနီးဖြစ်နေပြီ.. ပြန်ရှယ်တာကျေးကျေးဗျို့
မှတ်သားစရာလေးတွေအတွက် ကျေးကျေးပါ မောင်မောင်ရေ
ကိုမြစ်ဆုံ ဖတ်ပြီးပြန်မျှပေးတာ ကျေးဇူးဗျာ..စာသားလေးတွေက တန်ဖိုး၇ှိလိုက်တာ..